Orinasa sy mpamatsy China China Daminozide (B9) | Lemandou
Daminozide dia karazana mpandrindra fitomboan'ny zava-maniry asidra succinic izay mitombina tsara. Alkali dia hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny Daminozide, noho izany dia tsy mety ny mifangaro amin'ny Agentia hafa (fanomanana varahina, fanomanana solika) na famonoana bibikely.
CAS No. 1596-84-5 Milanja molekiola 160,17
molekiolan'ny C6H12N2O3 Bika Aman 'endrika Vovoka kristaly fotsy
fahadiovana 99,0% min. Teboka mitsonika 162-164 °C
Residue amin'ny ignition 0,1% max Fahaverezan'ny fanamainana 0,3% max.
Daminozide dia afaka manemotra ny fitomboan'ny zavamaniry, manakana ny fitomboan'ny solofony sy ny ravina ambonin'ny tany, mampitombo ny atin'ny kôlôlôma amin'ny ravina, mampitombo ny taham-pitomboan'ny tuber ary mampiroborobo ny fiparitahan'ny tuber.
Daminozide dia afaka misoroka ny fizarazaran'ny sela, manakana ny fanitarana sela, zana-ketsa, manatsara ny fanoherana ny voina, mamony mialoha ny hazo voankazo, mampitombo ny taham-boankazo ary misoroka ny fihenan'ny voankazo alohan'ny fijinjana. Rehefa avy tototry ny zavamaniry i Daminozide dia afaka manakana ny biosynthesis an'ny endogenous gibberellin sy ny synthesis of endogenous auxin amin'ny zavamaniry. Ny tena lahasa dia ny manakana ny fitomboan'ny rantsana vaovao, hanafohezana ny halavan'ny atiny, hampitombo ny hatevin'ny ravina ary ny atin'ny klôlôlôfia, hisorohana ny filatsahan'ny voninkazo, hampiroborobo ny fametrahana voankazo, hitaona ny fakana fotony adventitious, mandrisika ny fitomboan'ny faka ary manatsara ny fanoherana mangatsiaka. Daminozide dia miditra amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny faka, fotony ary ravina. Izy io dia manana toetra sy rafitra mifehy tsara. Izy io dia entina mankany amin'ny faritra voadona miaraka amin'ny fikorianan'ny otrikaina. Amin'ny ravina, Daminozide dia afaka manalava ny vatan'ny palisade ary mamaha ny tavy spongy, mampitombo ny atin'ny klôofofila, manatsara ny fotosintesisan'ny ravina. Izy io dia afaka manakana ny mitosis ny meristem apical eo an-tampon'ny zavamaniry. Amin'ny fotony, dia afaka manafoana ny elanelan'ny internode ary manakana ny fanitarana ny sampana.
Daminozide dia afaka manakana ny fitomboan'ny zavamaniry ary mampiroborobo ny tsy fahampiana nefa tsy misy fiantraikany amin'ny voninkazo sy ny voankazo. Izy io dia misy fiantraikany amin'ny fampitomboana ny fandeferana mangatsiaka sy ny fandeferana amin'ny haintany amin'ny voly, ny fisorohana ny voninkazo sy ny voankazo latsaka, ary ny fampiroboroboana ny fametrahana ny voankazo sy ny vokatra.